वैदेशिक रोजगारीको पीडाः मलेशियामै रोकियो परियारको शव | Rajmarga
वैदेशिक रोजगारीको पीडाः मलेशियामै रोकियो परियारको शव
“नेपालमा शव ल्याए हामीले आफैँ गाउँमा पु-याउँछाँै । शव ल्याउनै समस्या भइरहेको छ” अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो । उहाँले एउटै गाउँका दुई युवा मलेशियामा मृत्यु भएको शोकमा गाउँ रहेको समेत बताए पनि मलेशियामै प्रक्रिया रोकिएको बताएपछि थप पहल गरिने बताउनुभयो ।
करिब पाँच वर्ष अगाडि मलेशिया पुगेका परियारको परिवारिक अवस्थासमेत निकै नाजुक छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण किरिया खर्चलगायत थप सहयोग जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ । रासस
Previous post: कस्ले र किन ग-यो? एकै घरका दुई नाबालकको हत्या
Next post: तपाई वियर पिउनु हुन्छ ? हेर्नुहोस फाईदा, बियर नराम्रो की तपाईंको सोच